ဆောင်းပါး - စမေ့ဖန်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2500 ကျော်ကာလဆီကအိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ဖြစ်ခဲ့သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်အခြေအနေတစ်ရပ်သည်မြန်မာနိုင်ငံပစ္စက္ခကာလ၌တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများနှင့်ဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေနှင့်တစ်ထပ်တည်းကွက်တိကျနေသည်ဟုပြောပြလျှင်ယုံချင်မှယုံမည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ရာဇဂြိုဟ်၊ပတ္တနား၊ဝေသာလီစသောအမည်နာမများယနေ့အထိသုံးနှုန်းနေဆဲဖြစ်သည်။
နောက်နေ့များတွင်လည်းဆရာကြီးသည်ဝဇ္ဇီမင်းသားတစ်ယောက်စီကိုခေါ်ထားပြီးဆင်ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိလဲ? မြင်းဘယ်နှစ်ကောင်ရှိလဲ? ရာဇဂြိုဟ်ကိုသွားလည်ဖူးသလား? ဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာဘယ်နှစ်ခါရေကူးဖူုးသလဲ? စသောအရေးမပါသောအကြောင်းအရာတွေကိုသာမေးပြီးလွတ်လိုက်သည်။ဆရာကြီးထံမှပြန်လာမင်းသားများကိုအဖေါ်မင်းသားတွေကပြန်မေးသောအခါတိုင်းအရေးမပါသောအဖြေများကိုသာကြားနေရသည်။၀ဇ္ဇီမင်းသားထဲတွင်အချင်းချင်းမယုံသင်္ကာစိတ်များတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာကြသည်။၀သာကာရသည်အချင်းချင်းကွဲပြားတင်းမာလာသောဝဇ္ဇီမင်းသားများကိုတစ်စစီဖဲ့ထုတ်ရာမှအုပ်စုအသွင်ဆောင်လာကြသောဝဇ္ဇီမင်းသားများကိုတစ်စုစီခွဲထုတ်၍တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြန်သည်။အရေးမပါသောစကားများကိုပြောပြီးပြနလွတ်လိုက်သည်။အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုကြီးထွားလာသောအခါဝဇ္ဇီမင်းသားအချင်းချင်းတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့တစ်အုပ်စုနှင့်တစ်အုပ်စုညီညွတ်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘဲဝါးအစည်းပြေသလိုပြိုကွဲကုန်တော့သည်။
စဖေ့မန်း အင်မတန်မှဥာဏ်ပညာရှိပါပေတယ် လေးစားပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဆောင်းပါးရေးသူ "စဖေ့မန်း" ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်လို့နားမလယ်မှာစိုးလို့ Comment လေးဝင်ပေးပါရစေ။
ရန်သူဟာ အင်မတန် ပရိရာယ်များတယ် အပြင်းနည်းနဲ့တိုက်လို့မရယင် အပြော့နည်းနဲ့တိုက်မှာပဲလေ ဒါကိုပဲ ရှေးခေတ်က ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးတွေထံမှာ ဘုရင့်သားတော် အိမ်ရှေ့မင်းသားတွေသော်မှ "ဓါးခုတ် လှံထိုး မြင်းစီး" စတဲ့ အထာရဿ (၁၈)ရပ် ပညာတွေကိုဆည်းပူးလေ့လာခဲ့ကြရတာကလား ခုခေတ်မှာတော့ "သေနင်္ဂဗြူဟာ" Strategy" မဟာဗြူဟာနည်းဗြူဟာတွေပေါ့။ ရန်သူကို Informer သတင်းပေး ထောက်လှန်း သူလျှိုထဲ့ သပ်လျှိုသွင်း အပြော့နည်းနဲ့ အသာလေး နိုင်အောင်စခမ်းသိမ်းနည်းတွေ အစ်စရေး ရပ်ရှား မြောက်ကိုရီးယား တရုပ်ပြည်ကွန်မြူနစ်စံနစ် FBI/CIA counter Spy တန်ပြန်ထောက်လှန်းရေးစံနစ်တွေကြွမ်းကျင်နေတဲ့ရန်သူကိုများ စိတ်ချလက်ချ ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်ကြတဲ့ KNU/KNLA ခေါင်းဆောင်များ ကျောပေးပြီး ကရင်လူထုကိုရှေ့ကရင်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုယင်တော့ " ခရာစ်တော်မှာအိပ်ပျော်ရမဲ့နေ့ကျယင် ဘုန်းကြီးတောင် အားနာလို့လာပေးရမှာနော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်ကျောက ထိုးလိုက်တဲ့ ဓါးကြောင့် ဘ၀ကူးသွားတာလေ ကရင်အချင်းချင်းကြောင့် ဘ၀ကူးတာမှမဟုတ်ဖု။